watchOS 4.3 beta 2 ikozvino iri mumaoko evanogadzira | Ndinobva mac
Yaive iyo yaive ichiri kuuya uye pano tinayo, iyo beta 2 yevagadziri veiyo inoshanda system yeiyo Apple Tarisa, tarisaOS 4.3. Isu tiri zvechokwadi kuona kuburitswa pasina kuwanda kukuru kubva kuApple, asi ichi chinhu chinouya munguva pfupi yapfuura "mukati meyakajairika" yazvino beta beta shanduro dzakaburitswa.
Iko hakuna zuva reimwe kana mairi chaiwo vhezheni, vakomana vanobva kuCupertino vanovamisikidza ivo pavanofunga zvakakodzera uye iwe unofanirwa kufunga kuti vese zvavo vanofanirwa kupfuudza mafirita anodikanwa kwazvo kusvikira vasvika kune vanogadzira, ndiani achange achitarisira ramba uchivandudza imwe neimwe yavo kusvikira vasvika kumushandisi wekupedzisira.
Kugadziriswa kwepamuviri, kugadzirisa mashandiro uye kugadzikana kwesystem ndiwo makuru makuru eanogona kuwanikwa mune ino nhevedzano yemabheas akaburitswa svondo rino. Nezuro chete vhezheni yekuvandudza ye macOS High Sierra yakaburitswa uye nhasi beta yechipiri yewatchOS inozosvika.
Mune ino kesi zvakanyanyisa kukosha kuti tigare tiri kunze kwe beta nekuti kana tichigadzirisa isu hatizokwanise kurodha vhezheni kunyangwe iine bug kana dambudziko rekuenderana rerumwe rudzi. Apple haidi shanduro dzeApple Watch kuti dzisvike kune vashandisi vakanyoreswa muchirongwa cheveruzhinji beta uye saka hatina idzi shanduro dzinowanikwa kunze kwevagadziri. Pasina mubvunzo, mune chiitiko icho chakasarudzika nhau dzinoonekwa mune ino beta, isu tichagovana nazvo nemi mese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 4.3 beta 2 ikozvino iri mumaoko evakagadziri
Marcelo berrios akadaro
Haisi iyo WatchOs 4.3 beta 2?
Pindura Marcelo Berrios
Zvakanaka Marcelo, ndine dambudziko pamwe nekuverengwa kweiyo betas inoenda machira ...
Kutenda yambiro, isu takagadzirisa !!